Jurgen Klopp oo si weyn u difaacay Mohamed Salah, kahor kulanka caawa ee Leicester City – Gool FM
Jurgen Klopp oo si weyn u difaacay Mohamed Salah, kahor kulanka caawa ee Leicester City
Dajiye January 30, 2019
(Liverpool) 30 Jan 2019. Macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa iska diiday eedeymaha loo jeedinayo Mohamed Salah ee ku aadan in uu si qaldan dhulka isugu tuuro xerada ganaaxa si uu u helo rigoore.
Salah ayaa sabab u noqday afar rigoore ee loo dhigay kooxda Liverpool 5-tii kulan ugu dambeesay ee horyaalka Premier League ay ka ciyaareen, taasoo keentay inuu la kulmo eedeymo aad u xoogan.
Laacibka reer Masar ayaa markale waxaa si xoogan loogu dhaleeceeyay kulankii Crystal Palace, kadib markii uu ku dhex dhacay xerada ganaaxa kooxda Crystal Palace, laakiin garsoorkii ciyaarta dhex dhexaadinayay ee Jonathan Moss ayaa iska diiday in uu rigoore u xisaabiyo.
Hadaba Jürgen Klopp ayaa kahor kulank caaw ee Leicester City wuxuu si weyn u difaacay laacibkiisa Mohamed Salah wuxuuna yiri:
“Dhamaan kuwa kale waxaa suuragal ah inay sidaas sameeyaan xiliyo kale, qofna run ahaantii kama hadasho, xaaladuna si fiican ayay u socotaa”.
“Waxaa jira xaalado kale iska cad, cidna kama hadlin sababtoo ah ma ahan xaalada mid quseysa kooxaha Man City, Man United, Liverpool, Arsenal ama Chelsea”.
“Weeraryahanka kooxda Leicester City Jamie Vardy, laguma dhaleeceenin, matalaadii rigoore uu sameeyay kulankii Southampton, miyuu qofna ka hadlay Vardy?, wuu istuuray xiligaas, miyuu noqonayaa shaqsi xun, sababa la xiriira arintaas uu sameeyay? Maya hada ma dhihi karo sidaas”.
Arsenal oo Gacanta ku soo dhigtay Xiddiga Barcelona ee Suarez
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Bournemouth vs Chelsea